Dhismaha Golaha Degaanka Gobolka Banaadir Oo Awood Xoog Leh La Isugu Geeyey Si Ay Sharciga Iyo Kala Dambeynta Ay Ugu Soo Celiso Magaalo Madaxda Muqdishu Iyo Degaanka Ku Wareegsan
Hogaamiye kooxeedyada muqdisho iyo wakiilada golaha baarlamaanka kooxda Muqdisho ayey ku qaadatay wakhti dheer iney soo dhisaan maamul goboleedka gobolka Banadir. Maanta ayey ku guuleysteen iney soo bandhigaan tirada uu ka kooban yahay golahaas degaanka oo dhan 64 xubnood.
Gudigii Loo xilsaaray maamul u sameynta gobolka Banadir oo ka kooban 57 xubnood ayaa ku guuleystey sameynta xeerka dhismaha maamulka cusub ee gobolka Banadir. Waxeyna door ka qateen sidii ay ugu fududeyn lahayeen qaabkii dadka gobolka ay u dooran lahaayeen madaxda maamuleysa degmooyinka iyo deegaanada ay ka kooban yihiin gobolka Banaadir.
Maamul u sameynta gobolka Banaadir ayaa ah xeeladii ugu sareysey oo ay qorsheeyaan hogaamiye kooxeedyada Muqdisho. Awood xoogan oo la siiyo golaha degaanka gobolka Banaadir waxey sharci ahaan u siineysaa golahaas iney soo celiyaan nidaamka iyo kala dambeynta gobolka. Sidoo kale waxey meesha ka sareysa in Muqdisho looga soo arrimiyo Boosaaso iyo Jowhar.
Haddii la helo maamul loo dhiso Muqdisho iyo magaalooyinka kale ee ka tirsan gobolka Banaadir oo aan ku dhisneyn qabiil, waxaa iska cad in loolanka siyaasadeed ay ku guuleysanayaan garabka Muqdisho. Sida badan la isma weydiinayo in maamulkaas loo dhan yahay iyo in kale, laakiin waxaa la sugayaa in la arko maamul shaqeynaya haddiiba ay doonto ha liidato tayadiisu.
Kooxda Jowhar ayey u muuqataa ineysan soo faragelin doonin maamul u sameyntaas in kasto aysan raali ka hayn maamul aysan iyagu soo magacaabin. Kooxda Jowhar ayaa cabsi weyn ka qabta in haddii ay isku daydo iney maamulkaas ku sameyso carqaladeyn ay u muuqan karto bilow dagaal, taas oo u keeni karta in lagu soo weeraro Jowhar wakhti aysan weli gaarin iney xididadoodu adkaadaan.
Maamul u sameynta dowlada gobolka Banaadir ayaa ah siyaasad xeeladeysan oo looga gudbi karo isbaarooyinka meherad ahaan looga xoogsado Muqdisho iyo degaanka ku dhow. Sidoo kale waxey taas meesha ka saareysa dagaaladii ay isugu dhacayeen kooxaha hubeysan oo salka ku haya dano beeleed. Maamul ka shaqeeya danta guud ee Soomaalida ku dhaqan Muqdisho waxey burbur u keeneysa kooxda Jowhar oo aan heleyn qiil ay ku sii joogto Jowhar. Wakiilada wadamada shisheeyaha oo dhan waxey isku raacsan yihiin iney soo degaan Muqdisho haddii loo sameeyo maamul magangeliya shaqaalaha iyo hantidooda.